थाहा खबर: पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोही बाहिर जानुपर्दैन : नगरप्रमुख अमानसिं तामाङ
सामान्य कृषक परिवारमा वि. सं. २०१८ असोज १ गते पिता जगुसिंह तामाङ र माता सङ्जी तामाङको कोखबाट जन्मिएका हुन्, अमानसिं तामाङ। बाल्यकालदेखि नै उनी राजनीतिमा चासो राख्थे।
२०३६ सालदेखि मसालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरे उनले। २०४७ सालमा जनआन्दोलन भयो। अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रेरणाबाट उनमा कम्युनिस्टप्रतिको छाप पर्‍यो। २०४९ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको उपाध्यक्ष बने उनी।
२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। उनी १० वर्षे जनयुद्धमा भूमिगत भएर आन्दोलनमा सक्रिय भए। शान्ति सम्झौता भएको धेरै वर्षपछि स्थानीय सरकार बन्यो। सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्रमुख बने। उनै तामाङसँग नगरपालिकाका समस्या र आगामी योजनाबारे थाहाखबरका लागि रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी–
नगर प्रमुख निर्वाचित हुनुभएको १० महिना पुग्यो, नगरपालिकाको काम कसरी चल्दै छ?
नगरपालिकाले पहिलो प्राथामिकता जनताको सेवा गर्नु नै हो। त्यसैले जनहितका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। जस्तै : पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जनता यसबेला घर बनाउने चटारोमा छन्। त्यसैले सामग्री ढुवानीलाई सहज होस् भन्ने हेतुले घरघरमा मोटरबाटो लैजाने अभियानमा जुट्यौँ। नगरपालिकाभित्रका ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै घरमा मोटरबाटो पुगेको छ। नगरपालिकाभित्र अन्य काम भइरहेका छन्। खानेपानी, सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम भई नै रहेका छन्।
तपाईंहरूको चुनावी ऐजेण्डाअनुसार काम कतिको भइरहेको छ?
मैले भोट माग्न जाँदा जनताको घरघरमा गएर बोलेको थिएँ, नगरपालिकालाई काठको पोलमुक्त बनाउँछु भनेर। त्यसको काम भइरहेको छ। डेढ करोड रुपैयाँको फलामको पोल आइसकेको छ। असार मसान्तभित्रमा गरिसक्ने योजना बनाएको थियो। तर, धेरै असरल्ल भएकाले अलिक कठिन भइरहेको छ।
चौतारा बजारमा सडकको काम भइरहेको छ। खानेपानी योजना बन्दै छ। जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको छ। कृषि, भेटेरेनरी र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै छौँ।
जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विस्तार गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म अस्पतालमा सामान्य बिरामी उपचार गराउन जानसमेत डराउँछन्, किन होला?
अस्पतालमा अहिले राम्रो उपचार नपाएको भन्ने जनगुनासो हामीले पनि नसुनेका होइनौँ। भूकम्पपछि अझै अस्पताल व्यवस्थित हुन सकेको छैन। उपचारका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको समेत व्यवस्था छैन। त्यसैले हामीले नयाँ रूपमा परिर्माजित गरेर मेडिकल कलेजको रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ। हेरौँ, कतिको सफल हुन्छ।
दश महिनाको अन्तरालमा अहिलेसम्म नगरपालिकाको विकासका लागि के भयो, के गर्दै हुनुहुन्छ?
मैले भर्खरै भने, खानेपानी, सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भनेर। एक वर्ष स्थानीय सरकारको व्यपस्थापनमै बित्यो। भर्खरै जनताले स्थानीय सरकार आएको महसुस गर्न थालेका छन्। अबको चार वर्षमा नगरवासीले समृद्ध नगरपालिका चाहेका छन्, यही बनाउने अभियानमा हामी छौँ।
चौतारा बजार अस्तव्यस्त भएकाले बजारभित्रको सडक निर्माण कार्यको थालनी भएको छ। बजारमा एकतर्फी मात्रै बाटो संचालनमा ल्याएका छौँ। आलडाँडादेखि गुम्बाडाँडासम्मको चौतारा बजारको वैकल्पिक बाटो स्तरोन्नति हुँदै छ। आगामी दुई वर्षमा १४ वटै वडाका सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। कालोपत्रेसम्म नसके पनि स्तरोन्नति गर्नेमा दुई मत छैन।
जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका आफैँमा आत्मनिर्भर बन्न कठिन अवस्था सिर्जना हुँदै छ, समृद्धितर्फ नगरपालिकालाई लैजान के कस्तो पहल हुँदै छ?
हो, नगरपालिका यतिबेला संकटको घडीमा छ। नगरपालिकाको आत्मनिर्भर बन्ने आधार केही छैन। त्यसका लागि नगरपालिकाले पर्यटक भित्राउँन पर्यटकिय क्षेत्रको अध्ययन सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान र जिल्लाको आन्तरिक स्रोत गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका थियौँ। अहिलेको हाम्रो मुख्य स्रोत त्यही हो। नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का नै हाम्रो आन्दानीको मुख्य स्रोत हो।
सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा ठूलो गौरती मन्दिर, हर्लाङवर्लाङ, इन्द्रावती नदी, विभिन्न गुफाहरू, ऐतिहासिक साँगाचोकगढी, जुगललगायतका हिमशृंखलाहरू, पहाडी मनोरम दृश्यहरू, तामाङलगायत विभिन्न जातजातिका वेशभूषा र संस्कृति, झरनालगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरू हाम्रा गौरव हुन्।
औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रहरू ल्याउन हामीले सबैलाई आग्रह गरीसकेका छौँ। साना तथा ठूला सबै व्यापार व्यवसाय गर्नेले नगरपालिकाले धेरथोर कर तिरेमा पनि नगरपालिकाको विकासमा बल पुग्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो प्रयास जारी राखेका छौँ। सम्भवतः यही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्छौँ होला पनि।
नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले ठूला कलकारखाना तथा उद्योगहरूलाई भित्र्याउने लक्ष्य पनि राखेका छौँ।
नगरपालिकाको पहिलेदेखिको समस्या खानेपानी हो, त्यसको समाधानका लागि के हुँदै छ, कति समयमा समाधान होला खानेपानीको समस्या?
खानेपानीको मुहान पहिचान गरी स्तरोन्नतिको काम तीव्र रूपले भइरहेको छ। जुगल–थालखर्क–होल्चेको काम तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाभित्र खानेपानीकोे समस्या धेरै भएको साँगाचोक हो। त्यहाँ पनि खानेपानीको योजना परेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव कतै हुँदैन, जुन हाम्रो प्रतिवद्धता हो।
नगरपालिकालाई चिनाउने आधार केके हुनसक्छज्, जसबाट नगरवासीले गौरव गर्न सकुन्?
चौतारा साँगाचोगढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। धार्मिक, साँस्कृतिक र कृषि पर्यटनका थुप्रै सम्भावना छन् यहाँ। यहाँ सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा ठूलो गौरती मन्दिर, हर्लाङवर्लाङ, ईन्द्रावती नदी, विभिन्न गुफाहरू, ऐतिहासिक साँगाचोकगढी, जुगललगायतका हिमशृंखलाहरू, पहाडी मनोरम दृश्यहरू, तामाङलगायत विभिन्न जातजातिका वेशभूषा र संस्कृति, झरनालगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरू हाम्रा गौरव हुन्।
यिनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थित प्रचारद्वारा यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। हाम्रो चौतारा बजार नजिकै भूकम्प स्मृति पार्क बन्दै छ। त्यसले पनि पर्यटक विस्तारमा बल पुग्ने आशा गरेका छौँ।
आगामी पाँच वर्षमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ?
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई समृद्ध नगरको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो योजना हो। यसका लागि हामी प्रतिवद्ध भएर लागेका छौँ।
चीन सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले चीन सरकारको सहयोग पाउनेमा ढुक्क छु। मेरो कार्यकालमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरवासीले समृद्ध नगरको रूपमा आफ्नो नगर देख्न पाउनेछन्। तर यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्नेछ। उच्च शिक्षा आर्जन गर्न, स्वास्थ्य उपचारका लागि, रोजगारीको खोजीमा कोही बाहिर जानुपर्दैन।
अहिलेसम्मको कामको जनताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
अहिलेसम्मको काम गराइबारे जनताले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नै दिएका छन्। मुख्य उपलब्धिको रूपमा हामीले बन्देउ–चौतारा सडक खण्ड ठानेका छौँ। यो सडक २०३३ सालमा ४२ मिटरको बनाउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसले सडक आसपासका घरहरू सबै सखाप पार्ने भएकाले २० मिटरको मात्रै बनाउन सफल भएका छौँ। यो सफलतालाई जनताले नजिकबाट नियालेका छन्।
अन्य कामहरू पनि नगरपालिकाले नगरेको होइन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, सञ्चारलगायतको विकासको पूर्वाधारमा जनअपेक्षित रूपमै काम भएका छन्।